Ungaxhuma kanjani kwikhompyutha i-Audio? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Isethi ephelele ye-imishini yokulalelwayokufaka phakathi imakrofoni, ama-mixers, ama-suppressor empendulo, imiphumela, ama-equalizer, ama-compressors, ama-exciters, ama-crossovers,abadlali be-disc, abahlanganisi, izikhulisi zamandla,izikhulumi ezinkulu ze-amplifier, izipikha ezengeziwe, Izipikha zokubuyisa, izipikha zokuqapha, izipikha ze-bass.
Ungayixhuma kanjani i-stereo kwikhompyutha
Izipikha ezisebenzayo nezipikha zokwenziwa:
Izipikha zekhompyutha zihlukaniswe kakhulu ngezinhlobo ezimbili zezipikha, izikhulumi ezisebenzayo nezipikha zokwenziwa. Indlela yokuhlukanisa lezi zikhulumi ezimbili ilula. Isipikha esisebenzayo sine-amplifier yamandla aphansi eyakhelwe ngaphakathi, exhunywe ngqo embobeni yemakrofoni yekhompyutha ngekhebula lesipikha, bese isebenza kahle lapho amandla evuliwe. Izipikha ezingenzi lutho zivame ukuba yizipikha ezinkulu noma ezinye izipikha zakudala, ezingenayo i-amplifier yamandla, ngakho-ke kufanele uqale uxhumeikhebula yesipikha kwisikhulisi samandla, bese uxhuma ikhompyutha ngentambo yokukhulisa amandla, bese ekugcineni uxhuma ukunikezwa kwamandla uye komunye umkhawulo wesikhulisi samandla. Lokhu kuzosebenza kahle.
1. Xhuma isipikha esisebenzayo kwikhompyutha:
Indlela yokuxhuma isipikha esisebenzayo kwikhompyutha ilula kakhulu. Imvamisa uvala itheku ekhishwa ngehedfoni yekhompyutha ngekhebuli elilalelwayo eliyi-3.5m elilodwa kuya kwamabili, bese uxhuma itheku elibomvu nelimhlophe lesipika ngakolunye uhlangothi. Xhuma ukunikezwa kwamandla ukuze usebenze. Manje hamba Ezinye izipikha eziqondene nekhompyutha ozithengayo zingaba ne-amplifier yamandla eyakhelwe ngaphakathi, ipulaki nokudlala.
2. Xhuma isipikha esingenzi lutho kukhompyutha:
Futhi ukugxila kwethu ukwethula indlela yokuxhuma isipikha esingenzi lutho kukhompyutha. Olunye ulayini kungenzeka lungafani nesixhumi esibonakalayo futhi ludinga ukuxhunyaniswa ngokushisela. Thenga i-Intambo kagesi engu-3.5 kuye ku-6.5emakethe ye-elekthronikhi, i-jack iyi-plug engu-3.5mm, bese i-weld ikhebula le-plug iye kufayela le-ikhebula yesipikha. Ukukubeka nje kalula, ipulagi engu-6.5 ixhunywe esiteshini sesikhulisi samandla, njenge-AUX DVD, njll. Ipulagi engu-3.5 ifakwa ekugcineni kwesiginali sekhadi lomsindo futhi kulungile. Kodwa-ke, abantu abaningi abalungile ekushiseleni ulayini, ngakho-ke banesibindi sokuzishisela bona bodwa. Okokuqala, hlola ubumbano lwezintambo ezimbili zesipika. Uma ubukhulu buhlehlisiwe, ngeke kube khona umsindo. Sebenzisa ibhethri le-AA bese uxhuma izintambo zombili zesipikha ezigxotsheni ezinhle nezimbi zebhethri. Uma uzwa umsindo "wokuqhekeka" ngaphakathi kwesipikha ngokupheqa izintambo, khona-ke isigxobo esibi sebhethri sixhunywe ocingweni lomhlabathi, uma kungenjalo akumele kube khona umsindo. Uma kuyisipikha esingakwesobunxele, kuyisiteshi esingakwesokunxele; uma kuyisikhulumi esifanele, kuyisiteshi esifanele. Kodwa-ke, uma kungukuxhumeka kwedijithali, kudingeka umugqa owodwa kuphela. Umkhawulo owodwa uxhumeke kokukhiphayo kwe-SDIF kwekhadi lomsindo bese kuthi elinye iphela lixhunywe kokufaka kwe-SDIF kwesikhulisi samandla. Ikhwalithi yomsindo ingcono.
Ngemuva kokuhlola ubukhulu besipika, kunezinti ezintathu kuplagi ye-stereo, okungukuthi umhlabathi neziteshi ezingakwesokunxele nangakwesokudla. Qondisa izintambo zomhlabathi zezipikha ezingakwesokunxele nezingakwesokudla ocingweni lomhlabathi lwe-plug nolunye ucingo eziteshini ezingakwesokunxele nangakwesokudla. Kukhona negobolondo lepulaki elingafakwa kuyo. Ngemuva kokuqedwa kokunamathisela, vala i-plug yegobolondo futhi icishe ifane nama-earphone athengwe ngaphandle.
Inkinga yokulahleka kwe-Coaxial